Wakaalada dakhliga DDSI oo sheegtay in guulo balaadhan laga soo hooyay hirgalinta qorshayaasha kor loogu qaadayo dakhliga deegaanka. - Cakaara News
Wakaalada dakhliga DDSI oo sheegtay in guulo balaadhan laga soo hooyay hirgalinta qorshayaasha kor loogu qaadayo dakhliga deegaanka.
Jigjiga (CN) Arbaca 7. October 2015 mid ka mid ah ilaha ugu waawayne ee ay dawladi ku gaadho horumar buuxa waa xoojinta iyo hirgalinta nidaamka cashuuraha/ dakhliga oo kor loo qaado si looga midho dhaliyo hayaanka hiigsiga qorshayaasha horumarineed ee u yaala deegaanka ayaa waxa ay wakaalada dakhliga deegaanku sanadihii ugu danbeeyay guulo la’xaad leh ka soo hoysay dhinaca kor u qaadida dakhliga deegaanka.
Haddaba maareeye ku xigeenka wakaalada dakhliga DDSI mudane Yaasiin Cumar Maxamed oo xafiiskiisa ugu waramay qaarka mid ah warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in ay wakaalada hadda ay hirgalisay qorshayaal cusub oo lagu dar dargalinayo ka midho dhalinta qorshayasha horumarineed. Wuxuuna tilmaamay maareeye ku xigeenku in wakaaladu hadda furtay xarumo cusub oo ka qayb qaadanaya kor u qaadida hab’raacyada fulineed ee balaadhinta dakhliga iyo goobo ah diwaangalinta cashuurbixiyayaasha taasi oo balaadhinaysa baaxada dakhliga deegaanka .
Maareeye ku xigeenku isaga oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu sheegay in wakaaladu dadaal cusul ugu jirto hirgalinta fulinta iyo fidinta qorshihii uu deegaanku isku filnaansho dhinaca kasta leh si dhaw ugu gaadhilahaa loogana maarmi lahaa deeqada dibadaha taasi oo uu sheegay in dadaal xoogan ay wakaaladu ugu jirto fulinta qorshayaashasi iyada oo la xoojiyay cududa awood siinta shaqaalaha wakaalada oo ku gaashaaman aqoon iyo awaamiirta xadaynta xuduuda awoodeed ee fidinta nidaamka cashuuraha/ dakhliyada taasi oo lagu higalinayo qorshayasha cusub ee dhinaca dakhliga deegaanka .
Ugu danbayntii waxa uu maareeye ku xigeenku ku booriyay muwaadiniinta bulshada deegaanku in ay ka qayb qaataan kor u qaadida dakhliga deegaanka oo sah’laya hirgalinta koboca dhaqaalaha dalka iyo deegaanka.